Ozbekistana : Fikorontanan’ny Politikan’Ny Raharaham-Bahiny · Global Voices teny Malagasy
Ozbekistana : Fikorontanan'ny Politikan'Ny Raharaham-Bahiny
Voadika ny 18 Marsa 2018 9:17 GMT
Kihon-dalàna lehibe teo amin'ny politikan'ny raharaham-bahiny tao amin'ny firenena ilay fanafoanana tamin-kerisetra nataon'ny governemanta Ozbeka ny fihetsiketsehana iray tao Andijana ny volana Mey 2005. Tsy navelan'ny governemanta hanao fanadihadiana mikasika ilay tranga ny Fiombonambe Eoropeana, ary taorian'ny fanoherana mafy nataon'ny governemanta Amerikana ny “tsy fanajàna ny zon'olombelona fototra”, noteren'i Tashkent hakatona ny tobin'ny tafika an'habakabaka Amerikana tao Khanabad.
Na izany aza, nampisy fiovàna tsara teo amin'ny fifandraisana marefo nisy teo amin'i Ozbekistana sy ny Tandrefana io. Ny fanekena ny fampiasan'i Etazonia sy OTAN ny tobin'ny tafika an'habakabaka tao Termez no vokatry ny politika vaovaon'ny raharaham-bahiny ao Tashkent, natao hampifanakaiky azy amin'ny Tandrefana. Araka ny efa notaterina, avelan'i Ozbekistana ireo firenena sasany ao amin'ny OTAN, anisan'izany Etazonia, hampiasa ny tobin'ny tafika an'habakabaka ao Termez (izay efa nampiasain'i Alemaina hatramin'ny taona 2001). Na hoe afaka ny hisidina ao Termez amin'ny fitaingenana fiaramanidina Alemana fotsiny aza izy rehetra.
Registan no nanoratra voalohany tao amin'ny tontolon'ny bilaogy Ozbeka momba io. Nitaraina ny amin'ny tsy fitoviana vaovao amin'ny loharano samihafa izy. Mbola porofoin'io indray ny fialangalanan'ny governemanta Ozbeka tsy haneho hevitra ofisialy mikasika ilay raharaha. Saingy na eo aza ny tsy fitovian-kevitra, misy fiovàna hita mazava ihany eo amin'ny politikan'ny raharaham-bahiny ao amin'ny firenena:
… Misy fiovana marina tokoa, saingy somary voafetra ihany. Amin'izao fotoana izao, mbola tsy nanao fanambaràna momba ilay fifanarahanany aloha ny governemanta Ozbeka. Ary tsy miandrandra ny hisian'izany ato anatin'ny fotana fohy aho. Miandrandra ny fifandraisana eo amin'ny Ozbekistana sy ny Tandrefana hihatsara kokoa hatrany aho — angamba mety hipetraka ao Termez ihany ny fiaramanidina Amerikana aoriana kely ao.
Resahan’ i Nathan ny mety hampisy izany fanomezandalàna ny andian-tafika tandrefana ao Ozbekistana izany.
Mafana fo vitsivitsy tsy mitonona anarana no milaza fa manahy ny amin'ny hisian'ny fihemoran'ny zon'olombelona raha hifandray akaiky kokoa izy ireo satria ny governemanta tandrefana lasa mazoto amin'ny fifamatoram-piarovana akaiky kokoa. Ny hafa milaza fa ny vinain-dry zareo ireo fifamatorana akaiky kokoa ireo fa mety hitondra ny fanalàna ny famaizana avy amin'i Etazonia. Araka ny tombatombako, toa efa azo antoka izany, kanefa mihevitra aho fa tsy mitondra zavatra be ny famaizana. Efa vita ny fanambaràna.
Toy ny mahazatra, mavitrika be ireo mpamaky ny Registan amin'ny fanehoankevitra. Manahy i Brian fa vao mainka “hanohintohina / handratra” ny mponina ny fisian'ny tafika Amerikana.
Heveriko fa betsaka amintsika no matahotra [miresaka ilay tranga tao Andijana fony nandrava an-kerisetra ny fitroarana tao ny tafika manokana Ozbeka nofanin'i Etazonia]. Na manohana (indray) ilay sampan-draharaha misahana ny fiarovana Ozbeka isika na tsia, izay foana no fahatsapàna hisy. Soa ihany fa hahafinaritra ilay fifandraisana na dia lasa lavitra aza… ary ho tahin'Andriamanitra ianareo, manantena aho fa tsy manofana na manome fitaovana ho azy ireo intsony indray isika.
Ny blaogy Central Asia no nitatitra fa nisy vokany ny fitsidihana ofisialy nataon'i Amiraly William J. Fallon tao Tashkent :
Hita fa nahavita mihoatra noho ny fanavaozana fifanakalozan-kevitra ilay fitsidihana nataon”Ingahy Amir.Fallon ny volana lasa teo. Inona no tokony handikantsika izao fifanakaikezana eo amin'ny Etazonia/OTAN sy Ozbekistana izao ? Efa nampiasain'ny andian-tafika Alemàna nandritra ny fotoana ela io tobin-tafika io, ka noho izany tena fiovana goavana ara-politika ho an'i Ozbekistan ilay izy sa ho an'i Etazonia ?
Libertad tao amin'ny neweurasia nanoratra fa “telo taona taorian'ny Andijan, nahavita nanangana tetezana ho azy sy ny Tandrefana ny governemanta Ozbeka”, ary nanampy koa hoe hahazo tombontsoa i Tashkent amin'ny fananana andian-tafika tandrefana any Termez.
Androany, mila ny Tandrefana ao amin'ny faritaniny i Ozbekistàna. Voalohany, hiaro tena amin'ny fahatongavana / fisongadinan'ny “ideolojia mifototra amin'ny finoana i Ozbekistàna . Faharoa, ny fitondrana Ozbeka izay mandray anjara amin'ny ady amin'ny Taliban dia miady koa amin'ny Hetsika Islamika ao Ozbekistana, izay miorina betsaka ao Afganistana ankehitriny ary manohana ny Taliban. Fahatelo, ilay namana akaikin'ny Filoha I. Karimov – mpitondra Rosiana V.Putin – efa fantatra amin'ny fomba ofisialy fa tsy manana toerana ambony intsony, ary mety hila ny fanohanan'ny tandrefana i Ozbekistàna. Fahefatra, hahazo fahefana bebe kokoa any amin'ny faritra Azia afovoany i Ozbekistana .